I-Vitamin PP: Inxaxheba yendalo
I-Vitamin PP - i-nicotinic acid, i-vitamin B3, i-nicotinamide, i-niacin inenani lezakhiwo ezinonophelo kunye nezixhamlayo, kunye neyeza elisemthethweni lilingana namayeza. I-Nicotinic acid yindlela eqhelekileyo ye-vitamin PP, ngaphandle koko, kunye ne-nicotinamide, yifom echaphazelekayo. Nangona i-nicotinic acid yafunyanwa ngekhulu le-19, kodwa ukuba ngokubunjwa kwayo ihambelana ngokupheleleyo ne-vitamin PP, bekungekho ngo-1937 ukuba yaziwa. Iinkcukacha ezininzi malunga nale vithamini esiya kuthiwa kule nqaku "I-Vitamin PP: indima yezinto eziphilayo."
Indima ye-biological ye vitamin PP.
Akukho nkqubo yokunciphisa i-oxidation inokwenzeka ngaphandle kwe-vitamin PP. Ukongezelela, i-vitamin PP inefuthe elizuzayo kwi-fatabetism ye-fatabolism, ikhuthaza ukukhula kweethambo eziqhelekileyo, kunciphisa izinga "elibi" kunye ne-cholesterol engadingekile egazini, ithatha inxaxheba ekuguquleni kwamafutha kunye noshukela ngamandla. Inani elaneleyo le-vitamin PP emzimbeni womntu ulikhusela kwi-hypertension, isifo sikashukela, i-thrombosis, kunye nezifo ze-cardiovascular disease. Kwakhona, i-vitamin PP ikhuthaza ukusebenza ngokuqhelekileyo kwenkqubo ye-nervous. Ukuba uthatha i-vitamin PP ngaphezulu, unokuthintela okanye ukhulule imigraines. Ukongezelela, ixabiso elaneleyo le-vitamin PP linomphumo onobuncedo kwimpilo yesondlo kunye nesisu: kukhuthaza ukubunjwa kwejusi yesisu, ukulwa nokulwa nokuvutha, ukuvuselela i-pancreas kunye nesibindi, kunciphisa ukunyuka kokutya emathumbu.
Ukongeza, i-vitamin PP ibalulekile ekwakheni amaseli obomvu wegazi kunye nokuhlanganiswa kwe-hemoglobin. Le vithamini ithatha inxaxheba ekwakheni imvelaphi ye-hormonal, le ngenye yezinto eziphambili ze-vitamin ezivela kwabanye. I-Vitamin PP inendima ekwakheni i-progesterone, i-estrogen, i-insulin, i-testosterone, i-thyroxine, i-cortisone - i-hormone efunekayo ekusebenzeni kweenkqubo ezininzi kunye namalungu.
I-Vitamin PP, i-nicotinic acid, i-niacin, i-vitamin B3-kunokuthiwa ngamagama enye into. Ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-nicotinic acid okanye i-niacin, kwaye i-nicotinamide iyimvelaphi ye-nicotinic acid. Njengoko zifunyenwe ngabaqeqeshi bezonyango, i-niacin yonyango elisebenzayo ekulawuleni i-cholesterol egazini.
Ndiyabulela u-niacin, amandla akhiqizwayo, ngaphezu koko, inceda ukugcina ukusebenza ngokuqhelekileyo kwentliziyo kunye nokujikeleza kwegazi. Kwakhona, i-niacin ithatha inxaxheba kwi-metabolism, kuquka amino acid.
Kukho iimeko xa, ngenxa ye-niacin, abantu ababesinda kwi-heart attack bahlala bephila. U-Niacin uyakwazi ukunqanda ukuhlaselwa kwentliziyo, kunye nokwandisa ubomi besigulane, nokuba ngaba wayeka ukuthatha i-vitamin. Kwakhona, le vithamini inciphisa izinga le-triglycerides, eline-type 2 yeswekile nesifo soxinzelelo lwengqondo ngokunyuka.
I-Nicotinamide inako ukukhusela ukuphuhliswa kwesifo sikashukela, kwaye oku kubangelwa kukuba ikhusela i-pancreas, evelisa i-insulin kumonakalo.
Oogqirha baye baqonda ukuba ngohlobo lwesifo sikashukela se-type 1, i-nicotinamide inciphisa imfuno ye-insulin injections. Kwaye njengesixhobo sokukhusela i-nicotinamide kunciphisa ukuphuhliswa kwesi sifo ngo-50%.
Xa izifo ezidibeneyo - i-osteoarthritis, eyabangelwa ngu: ukugqithisa, ukuzala, ukungabikho kwezondlo kwiishukela, ubudala (emzimbeni zonke izitokisi ziphelile) i-nicotinamide iyanciphisa kakhulu intlungu, okwandisa ukuhamba kwamalungu.
I-Nicotinamide, kunye ne-niacin, ivuselela ukuphazamiseka kwengqondo kunye neuropsychic, inciphisa uxinzelelo, ukuxhalabisa, inqanda ukuphuhliswa kwe-schizophrenia, kunye nokuphucula ingcamango.
Imfuno yansuku zonke yendalo kwi-vitamin.
Umntu omdala, ukutya kwansuku zonke ngu-20 mg we-vitamin PP. Ngomntwana oneminyaka ezintandathu ubudala, u-6 mg ngosuku uwanele, kodwa umthamo wemihla kufuneka ukwandise ngobudala, kwaye xa umntwana efika ebusheni, umgangatho wemihla kufuneka ube ngu-21 mg. Ngaphezu koko, amantombazana e-vitamin PP afuna ngaphantsi kwamajoni.
Ngomdla okanye ukwenziwa komzimba, izinga lemihla ngemihla liyakhula ukuya kuma-25 mg. Umgangatho wemihla ngemihla we-vitamin PP kufuneka unyuke ube ngu-25 mg okanye ngaphezulu xa ukhulelwa kunye nokuhlaselwa.
Ziziphi izithako ze-vitamin PP?
Okokuqala, le vithamini ifumaneka kwimveliso yemvelaphi yemifuno: izaqathe, i-broccoli, iifatate, iigrafu, imvubelo kunye namanqatha. Ukongeza, i-vitamin PP ifumaneka kumhla, utamatisi, umgubo wengqolowa, iimveliso zokutya kunye neengqolowa zengqolowa.
I-Vitamin PP ifumaneka kwimveliso yesilwanyana: ingulube, isibindi sesilwanyana, intlanzi. Kwakhona kwimveliso enje: amaqanda, ubisi, ushizi, izintso, inyama yenkukhu emhlophe.
Inani lezityalo ezinokuthi liqulethe i-vitamin PP, kukuthi: i-sage, sorrel, i-alfalfa, ingcambu ye-burdock, isisindo se-rose, i-gerbil, i-chamomile, i-nettle. I-clover ebomvu, ikati yekati, imbewu ye-fennel, i-peppermint, i-fenugreek hay, i-horsetail, i-hops, i-cayenne pepper. I-oats, i-dandelion, i-ocharock, i-mullein, amaqabunga e-raspberry, iparsley, i-ginseng.
Ukuba umzimba unayo i-amino acid tryptophan, ke oku kuza kubangela ukubunjwa kwe-nicotinic acid. Le asidi iya kuba yanele xa isilwanyana sifakwe kwizinto ezinokwaneleyo zeeprotheni zezilwanyana.
Zonke ezi mveliso zinamanani ahlukeneyo, kuba ziqukethe ii-vitamin PP kwiifom ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, kwingqolowa, okusanhlamvu, i-vitamin ifumaneka kwifomu enjalo ukuba umzimba awunamkeli. Kwaye kwimiqolo, ngokuphambene noko, kwifom elula yokugaya.
Ukungabi ne-vitamin PP.
Ukusilela kwale vithamini kuya kubangela ukunciphisa isondlo, isisulu, isisu, isisu, isisu, isisu kunye nomlomo, iphunga elibi emlonyeni, urhudo, iingxaki zokugaya. Ukusilela kuya kuphazamisa inkqubo yeentlanzi: ubuthathaka obumama, ukukhathala, ukulala. Ukutshatyalaliswa, ukunganakwa, ukuphathwa kwentloko, ukudandatheka, ukugula komzimba, i-delirium, ukulahleka koqhelaniso, ukuhlaziya.
Ekhupheni, ukungabi naluphiko lwe-vitamin PP kuya kuthintela oku kulandelayo: ukoma, i-pallor, ukuqhekeka kunye nezilonda ezinobungozi, ukukhangela nokubomvu kwesikhumba, i-dermatitis.
Ukongeza, ukunqongophala kungabangela i-tachycardia, ukunyanzelwa kwe-immunity, intlungu emilenzeni, ukwehla kwizinga lezeshukela zegazi.
Ngexesha lokulungiselelwa kwe-vitamin PP, i-20% ephezulu ilahlekile, enye iphethwe ngokutya. Kodwa indlela yokugaya ixhomekeke kukutya okukhethileyo, ingakumbi uhlobo luni lwemveliso yeprotheni oyikhethile.
I-Vitamin PP: iingqinisiso zokusetyenziswa.
Ukuchasana: ukunyuka kwezifo ezithile zendlela yokugaya: isilonda sesisu esiswini, umonakalo omkhulu wesibindi, isilonda se-peptic ye-duodenum. Ngendlela edibeneyo ye-atherosclerosis kunye nomfutho wegazi ophezulu, i-uric acid, i-gout, i-vitamin PP inqatshelwe.
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-apophyllite
Iipilisi zamagqirha ezifunekayo entliziyweni
I-Broccoli kunye nama-mushroom
Indlela yokwenza ulusu lobuso kunye nomzimba luhle?
Ukulimala, izingozi phakathi kwabantwana
Ngaba i-intanethi iya kugcina isikhundla sayo kwiminyaka eyi-15?
Umzimba womntu - ugugu kunye namajethi
Isaladi yeklabishi kunye nenkukhu kunye nomsundu
Iingcebiso ezithandathu zokunyusa ulutsha
I-Postpartum bandage: izinzuzo, iintlobo, ukuchasene
U-Irina Lobacheva uvakalise umdla wakhe umkakhe uDmitry Marianov ekufeni komdlali
Yintoni endiyenzayo ngaphambi kokuba ndihambe ngokutya?